Your search for the kulan shayga ugu fiican ee qarsoon joojiyaa! kulan xujo ama kulan ku maqan yihiin guud ahaan lagu yaqaan ay caqabado fikradeed oo macquul ah. Khubarada ayaa soo jeediyay this kulan oo lacag la'aan ah wax ku qariyeen ku sifayn android sida IQ kulan oo kobcinaya. Inkastoo ay jiraan kulamo badan oo ku lug leh xujooyinka; Si kastaba ha ahaatee, ciyaar xujo dhab ah diiradda ku soo oogayaa waxyaabaha qarsoon sida talaabo ah maamulaha gameplay. Marka laga reebo awoodda wax kulan qarsoon ee ay u abaari awoodda sababaynta macquul ah u daran, waxaa sidoo kale caan ku abuuraya farax buuxda, madadaalo buuxiyeen dareenka, iyo fursad aad u weyn in ciyaartoyda ay ka unwind iyo raaxaystaan. Dadka ayaa aad u danaynaya xujooyinka waxaa sida caadiga ah ku xaddidan awood si ay u helaan kala duwan u ciyaaro agagaarka leh. In this article waxaad ogaan doontaa qaar ka mid ah kulan taxadar leh loo doortay wax qarsoon u phone Androids, iyaga raaxaystaan.
Dark Arcana The (Damaashaadka) waa magaca la siiyo si ay u damaashaad uu dahsoon in fuula magaalada keeno waxaa leh qaar ka mid hawada dahsoon mugdi gali galay. Players Ay awoodaan si ay u sahamiyaan laba Caalamka: Diyaarad talantaalli ah oo ku nool gidaar Damaashaadka iyo adduunka dhabta ah. In kulankaan, ciyaaryahan ayaa la jiiday martay qaawiyo qarsoon oo shakhsiyadda jir loo yaqaan xun oo keliya ayaa ogaan sheekada musiibo shaqaalaha damaashaad. Haddii aad raadinayso in ay dadi aad maskaxda ku dhawaad ​​dhacdo dahsoon iyo weligiis doonayay inuu ka ciyaaro Sherlock Holmes, fursad aad bilaabo halkan.
2. yamayska (cadhadii Eden)
Platform: Android, macruufka, Windows, iyo Mac.
Xujooyinka yaamayska ku lug leedahay sahaminta xeradoodiina quuska la dhismayaasha xiiso leh, muuqaalada, hanti in mar qabi jiray dadka si tartiib tartiib ah macaluulsan. Sidoo kale waxaa jira fursad weyn oo uu aqrinayo xayawaanka badda sida shark oo halis muuqaalo wadanay in qaadataa faraxsanaa dhirteeda xaalad jahawareer iyo burburka oo ay ku jiraan suurtogalnimada ah ee isku dayaya inay ku dilaan. Weligaa ma la doonayo in ay ka qayb a kulan oo lacag la'aan ah wax qarsoon u xujo android buuxsamay tirada naxdin iyo walxaha? Yaamayska cadhadii Eden waa xaq aad u.
3. Gaarka ah Enquiry Detail
Platform: Androids version 2.3.3 oo lagu daray
Baarayaasha Forensic doonayay! Ma leedahay waxa ay qaadanayso in la dabble dunida ka mid ah xujo baadhitaanka in imtixaanka oo aad barato u soo bandhigi doona dilidda dahsoon galay? Waxaa laga yaabaa in aad hadda uun helay waqti la soo dhaafay in ka doodid doonaa xirfad ah tiriska tallaabo saacad iyo gameplay seeftii. Halkan waxaa kulan la mu'aamaraad, iyo dilidda dahsoon, musuqmaasuqa, iyo rabshada sida aan weligaa ka hor loo yaqaan buuxiyeen.
4. Waraaqaha ka socda meel 2
Haddii aad ayaan ciyaarin prequel in ay waraaqo ka meel, ka dibna u degdegay fiiriya, waayo, waxa kaliya oo kaaga dhex lumin adduunka ee ciyaarta warqad dahsoon. Waraaqaha ka socda meel qoreysa Audrey oo soo ururay warqado kugu caawin kara boostaalaha meyd ah oo la filayo in xarfaha iyada toosin doonaa si ay ninkeeda maqan. Nasiib darro, iyada waxaa ay keentay in magaalada muuqasho.
5. muraayadihii Albion
Muraayadihii Albion waa ciyaar xiiso leh oo xiiso dhigay da'da Victoria ee London. Waxaa ku raran yihiin saacad iyo seeftii, dembiyada, iyo dhammaan qoynin oo ka mid ah dambiyada iyo basaasnimo. Ma waxaad u jecel daawashada James Bond? Haddii aad samayn, halkan waa fursad lagu gudbayaasha James Bond oo aan wax cabsi ah ka raabka Qishka. Players Ku biiri kartaa in madadaalo ah, isku day in aad qabto gool la'aanta adag, oo ay la kulmaan sheekada asalka ah. Sidoo kale, waxaad qaban karaa adventures badan oo aad baaris inay ku Daalin Queen of Hearts qorsheyaasha jinniyada.
6. Case Dambiyada
Platform: Androids madal version 4.0
Kiiska Dambiyada qoreysa awood u leh inay baaraan goobaha dambiga magaalo adag oo har. Players Ay awoodaan in ay la saaxiibo ciyaaro iyo is loolan inay ka soo baxaan sida Baare ugu fiican, baaraan furayaasha, iyo ka baran daydo in ay helaan xujooyin, tuhmane oo markhaatiyaal weydiiso su'aalo baaris qaar ka mid ah, ugu dambeyntii soo qabto kuwii dilay, oo waxaad iyaga keentaa in caddaaladda.
7. Prince Faaris (Classic)
Sidee baad jeclaan lahayd inuu ahaado Amiir caanka Faaris ergo si uu u badbaadiyo amiirad xitaa haddii ay ciyaar xaalad hungo on? Waad ku noolaan kartaa adiga oo riyo si kastaba ha ahaatee aan waaqici ahayn by ciyaaro kulankaan oo arkaan farax iyo biimayn of this ciyaar aad u archetypical.
Ever doonayay in ay baadhaan dad badan oo adduunka captivating? Hadda, waxaad haysataa fursad aad ee tan kulan wax bilaash ah ku qariyeen android; heli diyaar u ah inuu ku biiro bulshada ee dadka xirfad gaar ah in ka doodida derbiyada in kala qaybin xaqiiqada iyo dunida sixir ah.
Ma aad soo bixi burburin-ku dhacay? Haddii aan sidaas yeelno hadda sababta oo ah 2020 My Country waa dabagal ay u. Ciyaarta ayaa waxaa ku jira dalabka isagoo in ka badan 20 milyan oo ciyaartoyda adduunka oo dhan. Waxaa ku lug leedahay abuurista iyo xakamaynta magaalooyinka ultramodern. Haddii aad baqtiyaanasiib talada adduunka oo ay u badan tahay loo baahan yahay bar billow ah, 202 dalkayga waa madal ku haboon si ay u gutaan aad riyo; inkasta oo ay tahay hungo ah - mayor aad hesho si aad u 5 daqiiqo ammaanta.
Platform: Android 2.3 oo lagu daray
Ma waxaad tahay qof taageere ah oo Kin Kardashian? Haddii aad tahay, iyada biiri ku biimayn ah rooga cas Korka fursad in ay soo saaraan aad aad iska noqon lahaa tirada caan ah iyo bilaabayso socod si magac iyo nasiibkooda.
Halkan waxa aad, liiska ugu wanaagsan ee 10 kulan oo lacag la'aan ah wax ku qariyeen androids leeyihiin. Waxay ka kooban tahay qaybaha kulanka xujo kala duwan laga bilaabo naxdin qarsoodiga, xiiso katiifadaha casaan u quudhin inay xiiso leh iyo excitements fudud.
> Resource > Emulator > Games UJEEDDO Best qariyeen Android